September 2019 – News Portal
रोल्पामा बस दुर्घटना हुँदा दुईजनाको मृत्यु
September 30, 2019 epradeshLeaveaComment on रोल्पामा बस दुर्घटना हुँदा दुईजनाको मृत्यु
रोल्पा, १३ असोज । रोल्पामा बस दुर्घटना हुँदा दुईजनाको मृत्यु भएको छ । सुनिल स्मृति गाउँपालिका–३ रुइनिबाङमा सोमबार भएको बस दुर्घटनामा परि दुईजनाको मृत्यु भएको हो । दुर्घटनामा परि लुङ्ग्री गाउँपालिका–३ का २२ वर्षीय चालक यामलाल घर्ती र लुङ्ग्री गाउँपालिका–२ का १८ वर्षीय यात्रु सूर्यलाल जीएमको घटनास्थलमै मृत्यु भएको सुनिल स्मृति गाउँपालिका–३ का वडा सदस्य […]
लागूऔषधको ‘ट्रान्जिट’ दाङ
September 29, 2019 epradeshLeaveaComment on लागूऔषधको ‘ट्रान्जिट’ दाङ
दाङ, १२ असोज । रोल्पाका गणेश वली असोज १ गते साढे ८ केजी लागूऔषध चरेससहित दाङको घोराहीबाट पक्राउ परे । उनीसँगै भुपेन्द्र थापा र अमृत थापा पनि लागूऔषध चरेससहित समातिए । उनीहरुले लागूऔषध ओसारपसारका लागि प्रयोग गर्दै आएको एउटा मोटसाइकल पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो । भदौ २२ मा तुलसीपुर उपमहागरपालिका–१८ मज्गैँको पत्रेखोलाबाट बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–९ का तसौवर खानलाई १० […]
‘मूल्य नबढे खोर खाली’
September 29, 2019 epradeshLeaveaComment on ‘मूल्य नबढे खोर खाली’
तुलसीपुर, १२ असोज । दाङका ब्रोइलरपालक किसानले उत्पादित कुखुराको मूल्य नबढे खोर रित्तो पार्ने चेतावनी दिएका छन् । लामो समयदेखि दाना तथा चल्लाको मूल्य बढेपनि उत्पादित कुुखुराको मूल्य नबढेको भन्दै ब्रोइलरपालक किसानहरुले मूल्य बढाउन माग गर्दै आएका पनि छन् । किसानहरुले तयारी कुखुराको मूल्य तत्काल समायोजन नभए चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने उनीहरुको भनाइ छ । सप्लायर्सले दाना तथा कुखुराको […]
आजदेखि दसैँ सुरु
September 29, 2019 epradeshLeaveaComment on आजदेखि दसैँ सुरु
तुलसीपुर, १२ असोज । नेपालीहरुको महान चाड बडादसैँ आज आइतबारदेखि शुभारम्भ भएको छ । हिन्दुधर्मावलम्वीहरुले विशेष महत्वका साथ मनाउने यो पर्वको पहिलो दिन घर–घरमा जमरा राखी घटस्थापना गरी दसैँ भित्र्याउने धार्मिक प्रचलन रहेको छ । प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदाको दिनदेखि सुरु हुने दसैँलाई नवरात्रीको रुपमा पनि मनाउने गरिन्छ । नवरात्री सुरु भएको पहिलो दिन विधिपूर्वक घट अर्थात् […]
नवरात्र प्रारम्भ र दसैंको महत्व
September 29, 2019 epradeshLeaveaComment on नवरात्र प्रारम्भ र दसैंको महत्व
नेपालीमा एउटा उखान छ । ‘आयो दसैँ ढोल बजाई गयो दसैँ ऋण बोकाई !’ परम्परागत मनाउँदै आएको दसैँ पर्व यो बर्ष पनि नजिक आएको छ । दसैँको लागि आवश्यक सरसामान किनमेल गर्नेहरुको बजारमा भिड देखिन थालेको छ । छिमेकी मुलुक चीन र भारतबाट भित्रिने खसी, बोका, हाँस, कुखुरा एवं राँगोको मूल्य आकाशिएको छ । कमाइ गर्न देश, विदेश गएका […]
खप्तडी बस्नेत वंशावली तथा उत्थान समितिको साधारण सभा
September 29, 2019 epradeshLeaveaComment on खप्तडी बस्नेत वंशावली तथा उत्थान समितिको साधारण सभा
दाङ, असोज ११ खप्तडी बस्नेत वंशावली तथा उत्थान समिति केन्द्रीय कार्यालय दाङको १३औँ वार्षिक साधारण सभा तथा दसैँ मिलन कार्यक्रम शनिबार दाङको हेमन्तापुरमा सम्पन्न भयो । समितिका अध्यक्ष डिल्ली बहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि डाक्टर रमेश बस्नेतले यस संस्थासँग हातेमालो गर्दै स्वास्थ्य शिविर संचालन गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । विशिष्ट अतिथि […]
उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न जोड
September 29, 2019 epradeshLeaveaComment on उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न जोड
विभिन्न सहकारीको साधारण सभा घोराही, १२ असोज । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले जोड दिएका छन् । उत्पादनशील क्षेत्रको पहिचान गरेर लगानी गरे मात्र सफल सहकारी हुने बताएका थिए । घोराहीमा आयोजना गरिएका विभिन्न सहकारी संस्थाहरुको सहभागीहरुले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न जोड दिएका हुन् । नमस्ते बचत तथ ऋण सहकारी लिमिटेडको १९औँ वार्षिक साधारण सभामा सहभागीहरुले ऋण […]
विद्यार्थीलाई संस्कार सिकाउन जरुरी
September 29, 2019 epradeshLeaveaComment on विद्यार्थीलाई संस्कार सिकाउन जरुरी
तुलसीपुर, १२ असोज । धार्मिक मूल्य मान्यता र आफ्ना परम्परालाई जोगाउने खालको शिक्षा आजको आवश्यकता भएको शिक्षा सरोकारवालाहरुको भनाइ छ । आफ्ना बालबालिकाहरुले विद्यालयका के सिक्छन् ? के सिकाउनु पर्छ ? र कसरी सिकाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई शिक्षकहरुले ध्यान दिन नसके पढाइले मानिसलाई निकृष्ट बनाउने उनीहरुको भनाइ छ । शनिवार तुलसीपुरमा भएको बडादसैँ विशेष कार्यक्रमका अवसरमा बोल्ने बक्ताहरुले पढ्ने […]
प्राविधिक शिक्षा बेरोजगारको आधारः सुवेदी
September 29, 2019 epradeshLeaveaComment on प्राविधिक शिक्षा बेरोजगारको आधारः सुवेदी
तुलसीपुर, १२ असोज । सिटिइभिटी प्रदेश नम्बर ५ का उपनिर्देशक यादव सुवेदीले प्राविधिक शिक्षाले बेरोजगार अन्त्य गर्ने बताएका छन् । वेष्टर्न नेपाल कलेज अफ इन्जिनियरिङ एण्ड म्यानेजमेन्टले शनिबार तुलसीपुरमा आयोजना गरको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बढ्दो बेरोजगारीको विकल्प नै प्राविधिक शिक्षा रहेको बताए । उनले दाङसहित देशभर पछिल्लो समय प्राविधिक कलेजहरु स्थापना हुने क्रम बढ्दै गएको भन्दै […]
बैंकको सचेतना ¥याली
September 29, 2019 epradeshLeaveaComment on बैंकको सचेतना ¥याली
तुलसीपुर, १२ असोज । मुक्तिनाथ विकास बैंकले शनिबार तुलसीपुरमा डेंगु रोगबाट बच्न सचेतना ¥याली गरेको छ । डेंगुको संक्रमण बढ्दै गएपछि नागरिकमा रोगबाट बच्न बंैकले सचेतना ¥याली गरेको हो । बैंकका दाङ र सल्यानमा रहेका छवटा शाखाबाट कर्मचारी सहभागी रहेको ¥याली तुलसीपुरको वीरेन्द्र चोक हुँदै त्रिसिद्धेश्वरी मन्दिरमा पुगेको थियो । डेंगुबाट बच्न घरआँगन सफा राखौँ […]